Zahao ny tanjaky ny signal WiFi - Raha toa miadana ny haratonao na tsy mirotsaka ny pejin-tranonkala dia mety ny rohy Wi-Fi anao no olana. Angamba lavitra anao lavitra ilay fitaovana ianao, na misy fizarana matevina manakana ny famantarana. Zahao fotsiny ny tanjaky ny Wi-Fi marina anao.
Maninona no mitondra fahasamihafana ny tanjaka WiFi Signal
Ny fambara mahery amin'ny Wi-Fi dia manondro rohy azo ianteherana kokoa. Io dia ahafahanao mandray soa feno amin'ny hafainganana azo avy amin'ny Internet azonao. Ny tanjaky ny Wi-Fi dia miankina amin'ny anton-javatra marobe, ohatra ny halaviranao amin'ny router, na ny fifandraisana 5ghz na 2.4, ary ny karazana rindrina akaikinao. Arakaraky ny maha akaiky anao ny router, no azo antoka. Rehefa mandefa bebe kokoa ny fifandraisana 2.4ghz dia mety hanana olana amin'ny fanelingelenana izy ireo. Ny rindrina matevina vita amin'ny fitaovana matevina (toy ny beton) dia hisorohana ny famantarana Wi-Fi. Ny fambara malemy, kosa, dia mitarika haingam-pandeha, fidinana, ary fiatoana tanteraka amin'ny toe-javatra vitsivitsy.
Tsy ny olana amin'ny fifandraisana dia vokatry ny tanjaka famantarana malemy kokoa. Raha miadana ny harato amin'ny findainao na ny takelakao dia atombohy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny router raha manana ny fidirana amin'izany ianao. Raha mitohy ny olana, ny dingana manaraka dia ny miantoka raha Wi-Fi no olana. Andramo ny fampiasana Internet amin'ny fitaovana mifandraika amin'ny Ethernet. Mbola raha manana olana ianao, ny tambajotra no olana. Raha tsara ny rohy Ethernet ary tsy nanampy ny famerenana router dia tonga ny fotoana hijerena ny tanjaky ny signal.
Mampiasà rafitra miasa amin'ny rafitra miasa
Microsoft Windows sy ny rafitra miasa hafa dia misy fampitaovana ao anatiny hanaraha-maso ny fifandraisana tsy misy tariby. Ity no fomba haingana sy mora indrindra handrefesana ny tanjaky Wi-Fi.
Ao amin'ny kinova Windows vaovao, safidio ny kisary tambajotra eo amin'ny tsipika fizahana hahitanao ny tamba-jotra tsy misy tariby mifandray aminao. Misy bara dimy izay manondro ny tanjaky ny fifandraisana, izay iray ny fifandraisana mahantra indrindra ary ny dimy no tsara indrindra.
Mampiasa Smartphone Tabletor
Ny fitaovana finday sasany izay afaka amin'ny Internet dia manana singa ao anaty toe-javatra izay mampiseho ny tanjaky ny tambajotra Wi-Fi eo anelanelany. Ohatra, amin'ny iPhone, mankanesa any amin'ny app Settings, tsidiho izao ny Wi-Fi hijerena ny tanjaky ny tambajotra Wi-Fi izay misy anao & ny tanjaky ny tambajotra izay eo anelanelan'ny.
Mandehana any amin'ny Utility Program an'ny Wireless Adapters
Vitsy ny mpamokatra fitaovan-tseraseran'ny tambajotra na PC misy kahie manolotra rindrambaiko rindrambaiko izay manamarina ny tanjaky ny signal tsy misy tariby. Ny fampiharana toy izany dia mampahafantatra ny tanjaka sy kalitaon'ny signal mifototra amin'ny ampahany 0 ka hatramin'ny 100 isan-jato & antsipiriany fanampiny namboarina manokana ho an'ny fitaovana.
Safidy iray hafa ny rafitra Wi-Fi Locating
Fitaovana misy ny rafitra Wi-Fi manamarina ny fahita matetika amin'ny radio eo amin'ny faritra akaiky azy ary mahita ny tanjaky ny signal amin'ny alàlan'ny teboka fidirana tsy misy tariby. Sexista Wi-Fi mpitsikilo amin'ny endrika fitaovana bitika kely izay mifamatotra amin'ny rojo vy lehibe.
Ny ankamaroan'ny rafitra finday Wi-Fi dia mampiasa andian-tariby eo anelanelan'ny 4 sy 6 LED mba hanoroana tanjaka ny fambara amin'ireo vondrona bara toa ny fampiasana Windows. Tsy toy ny fomba etsy ambony, fa ny fitaovan'ny rafitra Wi-Fi dia tsy mandrefy ny tanjaky ny fifandraisana fa amin'ny toerany, maminavina fotsiny ny tanjaky ny fifandraisana.
Sokajy Glossary amin'ny Internet Leave a comment
Mpampiasa Blacklist / Block WiFi - Na dia voaro amin'ny alfabeta na litera na roa aza izy ireo, dia azo atao tokoa ny mahazo mpandahateny miditra amin'ny birao na tamba-jotra WiFi ao an-trano. Mety ho olon-tsy fantatra tsaramaso, mpandalo na mpifanila trano aminao, fa na iza na iza izy ireo, ilaina ny mahafantatra ny fomba hahitana raha ampifandraisina amin'ny tamba-jotra Wi-Fi anao ny gadget tsy ara-dalàna na tsy ekena ary amin'ny farany, ferana ny fidirany ary sakano izy ireo.
Ary rehefa manova ny tenimiafin'ny router-nao no fomba tsara indrindra hamerana ny fahazoana gadget tsy fantatra, dia somary mandreraka sy tsy mahomby. Azo antoka fa tsy misy antoka azo antoka fa ny stalker dia tsy 'hamaky' ny teny miafina farany ary hahazo fidirana indray amin'ny tambajotrao.
Ireto ambany ireto dia lisitra vitsivitsy azo itokisana & andian-tsoratra olona na gadget amin'ny tambajotra Wi-Fi anao nefa tsy manova ny teny miafin'ny router-nao.
1. Sivana ny adiresy MAC Wireless
Ny sivana MAC dia manampy ny Block WiFi mpampiasa tsy nahazoana alalana hifandray amin'ny Wi-Fi, tamba-jotra.MAC Address dia laharana (hardware) ID izay mahita ny fitaovana rehetra amin'ny tamba-jotra. Ny adiresy MAC dia novokarina tao anaty karatra tambajotra tsirairay ary tsy misy 2gadget eto amin'izao tontolo izao mety hanana adiresy MAC mitovy amin'izany.
Ka amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana adiresy MAC dia azonao atao ny manafatra ny router anao hatrany mba hanaiky na handà ny fidiran'ilay fitaovana ao anaty tamba-jotra.
Mba hanaovana izany, midira ao amin'ny tontonana fanaraha-maso ny router
Eo ambanin'ny fizarana WLAN na Wireless amin'ny console, tsy maintsy jerenao ny safidin'ny MAC Filter.
Raha tsy mandeha ny asany dia ovao ny 'Fahazoan-dàlana MAC' ho 'avela'
Manampia fitaovana amin'ny lisitry ny adiresy MAC ary misafidy raha te hanafoana ianao na hamela ny fidiran'izy ireo ao amin'ny tambajotran'ny router anao.
2. Lisitra mainty mivantana
Vitsy ny router WiFi mamela ny mpanjifa hanakana ireo gadget tsy fantatra amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo amin'ny Blacklist miaraka amin'ny fanindry lakile. Izy io dia tsy mitovy amin'ny marika router fa matetika ianao dia mety manampy fitaovana ao amin'ny Blacklist an'ny router ao ambanin'ilay faritra hoe 'Device Management' amin'ny fidirana amin'ny console / control panel na izay faritra rehetra izay mitanisa ireo gadget rehetra mifandraika amin'ny router-nao. Ao no ahitanao ny lakilen'ny mpanjifa "manakana" na zavatra hafa.
3. Fampiharana finday
Raha mitady fomba mitokantokana sy tsotra ianao sakano ireo gadget tsy fantatra avy amin'ny tamba-jotra WiFi anao, misy fitaovana tambajotran'olon-kafa mahomby izay azonao ampifandraisina amin'ny fitaovanao ho soloanao hiditra ao amin'ny tontonana fanaraha-maso ny router. Ohatra FING, azo alefa amin'ny fitaovana iOS & Android ary manome anao safidin'ny safidy fanaraha-maso hahafahan'ny mpampiasa mampiasa:
Sakano ny stalkers sy ny fitaovana tsy fantatra, na dia efa nifandray tamin'ny tamba-jotra aza izy ireo
Mampitandrina anao aho raha misy fitaovana vaovao ao amin'ny tambajotrao; mba mahatsikaritra fotsiny ny mpiditra an-tsokosoko
Jereo ny lisitry ny misaraka / fitaovana miaraka amin'ny tambajotrao
Mahazoa mamantatra ny adiresy IP, modely, adiresy MAC, anaran'ny fitaovana, mpivarotra ary mpamokatra.
Mahazoa fampandrenesana fitaovana sy fiarovana amin'ny tambajotra amin'ny mailakao sy telefaona
Na inona na inona fampifandraisan'ny gadget amin'ny tamba-jotra WiFi, azonao atao ny manakana azy ireo amin'ireo fomba telo etsy ambony nefa tsy mila manova ny teny miafinao. Fahendrena foana ny manamafy fa ireo gadget fantatra fotsiny dia mifandray amin'ireo tambajotra WiFi anao.
WiFi hotspot dia teboka fidirana net izay ahafahanao mampifandray amin'ny tamba-jotra WiFi miaraka amin'ny PC, smartphone na fitaovana hafa rehetra rehefa lavitra ny birao sy ny tambajotran-tranonao ianao.
Orinasa maro, tanàna, ary orinasa maro hafa no nanomboka nanolotra WiFi hidirana izay manampy ny olona hifandray amin'ny fifandraisana Internet mahery sy haingana izay matetika haingana kokoa noho ny tambajotra finday tsy misy tariby.
Nefa inona no atao hoe WiFi hotspot sy ny fomba fiasan'izy io? Azo antoka ve ny toerana mafana? Vakio ny fampahalalana rehetra tadiavinao etsy ambany.
Ahoana ny fomba fiasan'ny WiFi hotspot?
Ny toerana misy WiFi WiFi eo an-toerana dia miasa mitovy amin'ny fifandraisana Wi-Fi izay mety ho hitanao ao amin'ny birao na tranonao. Ny toerana misy WiFi dia miasa amin'ny alàlan'ny fifandraisana Internet ary mampiasa fitaovana tsy misy tariby, ohatra ny router sy ny modem, hiteraka fifandraisana tsy misy tariby, avy amin'izay ahafahanao mampifandray finday smartphone, takelaka, PC, na fitaovana hafa.
Mety tsy hitovy ny hafainganana, ny herinaratra, ny elanelam-potoana, ary ny vidin'ny toerana misy WiFi. Mbola ilay foto-kevitra iray manontolo ao ambadiky ny toerana misy WiFi ihany dia mitovy amin'ny tambajotra WiFi any an-trano, ary azonao atao ny mampifandray sy mampiasa ny toerana misy WiFi raha toa ka mampiasa tambajotra WiFi ao anatiny ianao.
Na dia eo aza ny toerana misy ny toerana misy WiFi na WiFi, dia misy karazana toerana hafa azo apetraka, ary tsy dia misy fahasamihafana mazava.
Fantsom-pifandraisana WiFi ho an'ny daholobe
Ny toerana ipetrahana amin'ny WiFi imasom-bahoaka dia izay no toa azy. Ny toerana mafana toy izany dia matetika - na dia tsy amin'ny fotoana rehetra aza - afaka ampiasaina. Ireo toerana toa ny kafe, tranomboky ho an'ny daholobe, fivarotana antsinjarany, & fikambanana sy orinasa hafa toy izany dia mety hanome fifandraisana WiFi maimaimpoana ho an'ny mpanjifa. Any amin'ny tanàna vitsivitsy, ny fitantanana sivika na ISP dia mety hanolotra fifandraisana WiFi ho an'ny daholobe maimaim-poana amin'ny faritra sasany. Maimaimpoana ireo, amin'ny faritra vitsy, toy ny seranam-piaramanidina sy hotely, mila mandoa vola ianao mba hidirana amin'ny toeram-pivarotana WiFi ampahibemaso.
Toerana fibatana finday WiFi
Misy karazana toerana mafana finday mahavariana. Ohatra, fantatrao ve fa azonao atao ny mampiasa ny iPhone ho toy ny toerana mafana Wi-Fi? Ny mitovy amin'izany dia zon'ny finday finday Android lehibe indrindra. Alefaso fotsiny ity fampiasa ity amin'ny findainao ary ampiasao ny angon-drakitra findainy amin'ny famoronana toerana fidirana WiFi. Aorian'izay dia azonao atao ny mampifandray an'ity hotspot ity miaraka amin'ny PC na fitaovana hafa izay tsy misy angona finday.
Azonao atao koa ny mividy teboka finday Wi-Fi namboarina ho tanjona izay natao hanovana ny fifandraisana data data ho lasa fifandraisana WiFi matanjaka. Ny olona mitsidika asa be na mitaky fidirana amin'ny fifandraisana WiFi azo itokisana dia mety tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo fitaovana azo vidiana amin'ny ankamaroan'ny orinasa finday ireo.
Toerana mafana mialoha
Ny toerana ipetrahana WiFi mialoha dia mitovy amin'ny finday mafana, mbola manana data voafetra azonao ampiasaina. Azonao atao ny mangataka mialoha an'ity angona ity, avy eo aorian'ny lany andro dia afaka mividy bebe kokoa ianao. Ity dia fomba tsara iray hahazoana toerana mafana amin'ny finday tsy misy famandrihana data finday efa ela.
Ny fomba tsotra indrindra hahazoana WiFi hotspot dia ny manokatra ny PC na findainao ary manomboka mitady. Amin'ny faritra maro ho an'ny daholobe dia ho hitanao fa be dia be ny toerana fandraisam-bahiny WiFi malalaka azonao ampifandraisina aminy, tsy andoavam-bola. Azonao atao mihitsy aza ny mitady ny toerana mafana WiFi manome ny ISP anao manokana.
Arovy ny tamba-jotra WiFi anao raha ilaina amin'ny fisorohana ireo mpanani-bohitra sy fiarovana ny angon-drakitrao.
Ahoana ny fomba hiarovana ny tamba-jotra Wi-Fi anao
To Arovy ny tamba-jotra Wi-Fi anao mitazona azy tsy ho voaro amin'ny hackers, misy dingana marobe tokony hataonao:
1. Ovao ny solonanarana sy ny passkey
Ny zavatra voalohany sy manan-danja indrindra tokony hataonao mba hiarovana ny anao Wifi Ny tambajotra dia ny manova ny solonanarana anarana sy ny teny miafina ho voaaro fanampiny.
Ireo mpamatsy Wi-Fi dia manome solon'anarana & passkey ho an'ny tambajotra ary mety ho hitan'ireo mpijirika fotsiny izany passkey default izany amin'ny Internet. Raha mahazo fidirana amin'ny tamba-jotra izy ireo dia mety hanova ny passkey amin'ny zavatra rehetra tadiaviny, hidio ny mpivarotra ary alao ny tambajotra.
Ny fanoloana ny solonanarana anarana sy ny teny miafina dia manahirana kokoa ho an'ireo mpanafika hahita izay Wi-Fi misy azy io ary mahazo fidirana amin'ny tambajotra. Ireo hackers dia manana gadget teknolojia avo lenta hanandramana fanangonana passkey sy solonanarana an-jatony, noho izany dia zava-dehibe ny fisafidianana teny miafina mahery vaika izay manambatra ny marika, ny litera ary ny isa mba hahamafana kokoa ny famakiana azy.
2. Kitiho ny tamba-jotra Encryption Wireless
Encryption dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fiarovana ny angon-drakitra tamba-jotra. Ny Encryption dia miasa amin'ny fampifangaroana ny angon-drakitrao na ny atin'ny hafatra mba tsy ho voamarin'ny hackers.
3. Fampiasana tambajotra virtoaly VPN
Ny Virtual Private Network dia tambajotra iray ahafahanao mifandray amin'ny tambajotra tsy voafaritra sy tsy voaro amin'ny fomba manokana. VPN manafina ny angon-drakitrao amin'izay ny hacker tsy afaka mampita izay ataonao an-tserasera na amin'ny toerana misy anao. Ankoatry ny birao dia azo ampiasaina amin'ny solosaina finday na telefaona koa izy io. Ary koa ny birao, dia azo ampiasaina amin'ny telefaona, solosaina finday, na takelaka mihitsy aza.
4. Atsaharo ny Wi-Fi Network raha tsy ao an-trano
Toa mora izany fa ny iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hiarovana ireo tambajotran-tranonao tsy hanafika dia ny famonoana azy rehefa lavitra ny trano ianao. Ny tambajotra Wi-Fi anao dia tsy mila miasa 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. Ny famonoana ny Wi-Fi anao raha tsy eo an-trano ianao dia mampihena ny mety hisian'ireo mpijirika am-pahefana mitady hiditra ao amin'ny tamba-jotra raha lavitra ny trano ianao.
5. Ataovy havaozina hatrany ny lozisialy router
Ny rindrambaiko Wi-Fi dia tokony havaozina ho fiarovana ny fiarovana ny tambajotra. Ny firmware an'ny router tahaka ny karazana rindrambaiko hafa dia mety misy ny fitrandrahana izay dodona ny hackers. Mpandeha maro no tsy hanana ny safidin'ny fanavaozana mandeha ho azy ka mila mitaky fanavaozana ara-batana ilay rindrambaiko ianao hahazoana antoka fa azo antoka ny tambajotrao.
6. Ampiasao ny afomanga
Ny router W-Fi farafaharatsiny dia misy rindrambaiko voaorina anaty rindrambaiko izay hiambina ireo tambajotra broadband ary hijerena ireo fanafihana amin'ny tambajotra avy amin'ny mpangalatra. Hanana safidy tsy hijanona mihitsy aza izy ireo, noho izany ilaina ny manadihady fa ny firewall an'ny router anao dia alefa mba hanampy fiarovana fanampiny ho an'ny fiarovana anao.
7. Fahazoan-dàlana hanivana ny adiresy MAC
Ny ankamaroan'ny mpandeha amin'ny broadband dia misy mpamantatra tokana fantatra amin'ny anarana hoe adiresy Media Access Control (MAC). Izany dia mikasa ny hanatsara ny filaminana amin'ny alàlan'ny fanamarinana ny isan'ny gadget izay mety mifandray amin'ny tambajotra.